✩✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩သီချင်းချစ်သူ ✪ မှ ✪ သီချင်းချစ်သူသို့✩ ✩ ✩ ✩ ✩ ✩✩
8Chit&အိမ့်ချစ် AhMoon&အမွန်း AhNaing&အနိုင် AhNge&အငဲ Akuk Alex&အဲလက်စ် AnnHellar&အန်ဟဲလာ Ar-T AungHtet&အောင်ထက် AungLa&အောင်လ AungNaing&အောင်နိုင် AungThu&အောင်သူ AungYin&အောင်ရင် AuraLi&အ်ာရာလီ AyeChanMay&အေးချမ်းမေ AyeTinChoShwe&အေသင်ချိုဆွေ AyeWuttYiThaung&အေးဝတ်ရည်သောင်း BaDin&ဗဒင် Blueberry BobbySoxer BoBo&ဘိုဘို BoBoHan&ဘိုဘိုဟန် BoPhyu&ဘိုဖြူ Breaky&ဘရိတ်ကီ BunnyPhyoe&ဘန်နီဖြိုး ChanChan&ချမ်းချမ်း ChanChann&ချမ်ချမ်း ChawSuKhin&ချောစုခင် ChinSong&ချင်းသီချင်း ChitKaung&ချစ်ကောင်း ChitThuWai&ချစ်သုဝေ ChoLayLung&ချိုလေးလုန် ChoPyone&ချိုပြုံး ChristmasSong&ခရစ္စမတ်သီချင်း CityFm Dawn&ဒွန်း DiraMore&ဓီရာမိုရ် DoeLone&ဒိုးလုံး Dway&ဒွေး EainEain&အိန်အိန်း G.Latt&ဂျီလတ် GaeGae&ဂေဂေး GirlLay&ဂဲ(လ်)လေး Graham&ဂရေဟမ် Group&အဖွဲ့လိုက် GuRawng&ကူးရောင် GyoGyar&ကြိုးကြာ HanTun&ဟန်ထွန်း HaymarNayWin&ဟေမာနေဝင်း He`Lay&ဟဲလေး HlonMoe&လွှမ်းမိုး HlwanPaing&လွှမ်းပိုင် HtamHkay&ထျန်ခေး HTDTunYin&ဟသာင်္တထွန်းရင် HtetAung&ထက်အောင် HtetHtetMyintAung&ထက်ထက်မြင့်အောင် HtetSaung&ထက်လျှောင်း HtooEainThin&ထူးအိမ်သင် HtooHtooSet&ထူးထူးဆက် HtooL.Lin&ထူးအယ်လင်း HtunHtun&ထွဏ်းထွဏ်း HtunYati&ထွန်းရတီ IreneZinMarMyint&အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့် J.LingMawng&ဂေလိန်းမောင်း J.MgMg&ဂျေမောင်မောင် JarSan&ဂျာဆန် JetSanHtun&ဂျက်ဆန်ထွန်း JMe&ဂျေးမီ KabarPhone&ကမ္ဘာဖုန်း KaiZar&ကိုင်ဇာ KapyaBoiHmu&ကဗျာဘွဲ့မှူး KaungKaung&ကောင်းကောင်း KhaingHtoo&ခိုင်ထူး KhinBone&ခင်ဘုဏ်း khinMgHtoo&ခင်မောင်ထူး KhinMgToe&ခင်မောင်တိုး KhinSuSuNaing&ခင်စုစုနိုင် KhupPi&ခုပ်ပီး KKT&ကေကေတီ KoKoGyi&ကိုကိုကြီး KoNi&ကော်နီ KyingLianMoong L.KhunYe&L.ခွန်းရီ L.LwinWar&L.လွန်းဝါ L.SengZi&L.ဆိုင်းဇီ LaShioTheinAung&လားရှိုးသိန်းအောင် LaWi&လဝီ LayLayWar&လေးလေးဝါ LayPhyu&လေးဖြူ LDKyaw&L.ဒီကျော် LiLiMyint&လီလီမြင့် LinNit&လင်းနစ် LynnLynn&လင်းလင်း Madi&မဒီ MaNaw&မနော Marritza&မာရဇ္ဇ MayKhaLar&မေခလာ MaySweet&မေဆွိ MayThu&မေသူ MgThitMin&မောင်သစ်မင်း MiMiKhe&မီးမီးခဲ MiMiWinPhay&မီမီဝင်းဖေ MinAung&မင်းအောင် Misandi&မိဆန္ဒီ MMGospelSong&ခရစ်ယာန်ဓမ္မတေး MMLoveSong&မြန်မာသီချင်း MoMo&မို့မို့ MoonAung&မွန်းအောင် Music&ဂီတ Myanmar-Kid-Songs MyayPeYo&မြေပဲယို MyoGyi&မျိုးကြီး MyoMyo&မျိုးမျိုး NangKhinZayYar&နန်းခင်ဇေယျာ Naung&နောင် NawLiZar&နော်လီဇာ NawNaw&နောနော် NgeNgeLay&ငဲ့ငယ်လေး NiNiKhinZaw&နီနီခင်ဇော် NiNiWinShwe&နီနီဝင်းရွှေ NO&နိုး NweYinWin&နွဲ့ယဉ်ဝင် NyanLinAung&ဥာဏ်လင်းအောင် NyiMinKhine&ညီမင်းခိုင် NyiZaw&ညီဇော် PannEiPhyu&ပန်းအိဖြူ PanYaungChel&ပန်းရောင်ခြယ် Pb.ThanNaing&သန်းနိုင် PhawKa&ဖော်ကာ PhoeKar&ဖိုးကာ PhuPhuThit&ဖူးဖူးသစ် PhyoGyi&ဖြိုးကြီး PhyoKyawHtake&ဖြိုးကျော်ထိုက် PhyuPhyuKyawThein&ဖြူဖြူကျော်သိန်း PhyuThi&ဖြူသီ PoEiSan&ပိုးအိစံ PoPo&ပိုပို PuSue&ပူစူး R.ZarNi&R.ဇာနည် RainMoe&ရိန်မိုး RebeccaWin&ရေဗက္ကာဝင်း Ringo&ရင်ဂို SaiHteeSaing&စိုင်းထီးဆိုင် SaiLay&စိုင်းလေး SaiSaiKhanHlaing&စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် SaiSaiMaw&စိုင်းဆိုင်မောဝ် SaiSan&ဆိုင်စံ SalaiJonhTinZam SalaiJonhTinZam&ဆလိုင်းဂျွန်သင်ဇမ်း SalaiSunCeu&ဆလိုင်းဆွန်ကျဲအို SalaiThuahAung&ဆလိုင်းသွှအောင် SalaiZamLain&ဆလိုင်းသျှမ်းလျန် SandyMyintLwin&စန္ဒီမြင့်လွင် SangPi&စံပီး SaungOoHlaing&ဆောင်းဦးလှိုင် SawBweHmu&စာဘွဲ့မှူး SawKhuSe&စောခူဆဲ She&သျှီ ShinPhone&ရှင်ဖုန်း ShweHtoo&ရွှေထူး SinPauk&ဆင်ပေါက် SiThuLwin&စည်သူလွင် SithuWin&စည်သူဝင်း SiYan&စီယံ Snare SoeLwinLwin&စိုးလွင်လွင် SoeNandarKyaw&စိုးနန္ဒာကျော် SoePyaeThazin&စိုးပြည့်သဇင် SoeSandarTun&စိုးစန္ဒာထွန်း SoTay&ဆိုတေး SungTinPar&ဆုန်သင်းပါရ် SuNit&ဆူးနစ် TekatawAyeMg&တက္ကသိုလ်အေးမောင် ThangPaa&ထန်းပါး TharDeeLu&သာဒီးလူ ThawZin&သော်ဇင် ThiriJ.MgMg&သီရိဂျေမောင်မောင် Thoon&သွန်း TinGyanSong&သင်္ကြန်သီချင်း TintTintTun&တင့်တင့်ထွန်း TinZarMaw&တင်ဇာမော် TunEaindraBo&ထွန်းအိန္ဒြာဗို TunKham&ထွဏ်းခမ် TunTun&ထွန်းထွန်း TuTu&တူးတူး V.NoTun&V.နိုထွန်း WaiLa&ဝေလ WaNa&ဝန WarsoMoeOo&ဝါဆိုမိုးဦး WineSuKhineThein&ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း WyneLay&ဝိုင်းလေး Xbox XGALZ Y-Zet YadanaMai&ရတနာမိုင် YadanaOo&ရတနာဦး YairYintAung&ရဲရင့်အောင် YanAung&ရန်အောင် YarZarWinTint&ရာဇာဝင်းတင့် YeTwin&ရဲသွင် YummyRookie YuZaNa&ယုဇန YY&၀ိုင်ဝိုင်း Z.DiLa&Z.ဒီးလာ ZamNu&ဇမ်နူး ZawOne&ဇော်ဝမ်း ZawPaing&ဇော်ပိုင် ZawWinHtut&ဇော်ဝင်းထွဋ် ZawWinShing&ဇော်ဝင်းရှိန် ZayYe&ဇေရဲ ZwePyae&ဇွဲပြည့်
သီချင်းနားထောင်ရန် အပေါ်က အဆိုတော် နာမည် Click ပါနော်
Facebook မှာ ဖတ်ချင်ရင် Like တစ်ချက်လောက် နဲ့ အားပေးနိုင်ပါသည်
တကယ်တမ်းတော့ လူဆိုတာ နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှုပြီး
တွေရှုသွင်းနေပေမယ့် အချို့သူတွေဟာ တကယ်တမ်း
တော့ အသက်ရှင်နေကြတာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ လူ
တစ်ယောက်ဟာ တကယ်တော့ မျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့
အရာလေးနဲ့ အသက်ရှင်ကြတာပါ။ ဘာကိုမျှော်လင့်
သလဲ မေးရင်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူ
ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သေချာတာက Hopeတော့ ရှိနေ
မှဖြစ်မယ်။ Hopeမရှိရင် စိတ်ဓာတ်ကျပြီး လူ့ဘဝကြီး
Posted by Ltcho at 11:50 PM No comments:
Labels: မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားစုများ
တကယ်တော့ ခရီးသွားတယ်၊ အပန်းဖြေတယ် ဆိုတာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖြေဖျောက်စေနိုင်ဖို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်တခုမှာ ငြီးငွေ့ နေ လို့ အခြား ပတ်ဝန်းကျင် အသစ်တခုမှာ ခဏတာ သွားရောက် ပျော်ရွှင်အောင် နေထိုင်လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ လေ့ လာတွေ့ရှိချက်အသစ်တွေအရ ခရီးသွားလာခြင်းဟာ အမျိုးသားတွေမှာရော အမျိုးသမီးတွေမှာပါ လိင်စိတ်နိုး ထမှု ရှိစေပြီး အိမ်ထောင်ရေးသုခကိုပါ ပြည့်စုံစေနိုင်တယ်လို့ သိရှိလာပါတယ်။
ကောင်းပါပြီ၊ ဒါဆို ခရီးသွားလာခြင်းကနေ ဘယ်လို အကျိုးတွေများ ရစေနိုင်ပါသလဲ။
Posted by Ltcho at 11:48 PM No comments:
တိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ မတိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည် ကြားမှာ ဘာတွေ ကွာသွားလဲ
တိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ မတိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည် ကြားမှာ ဘာတွေ ကွာသွားလဲဆိုတော့ အဲဒီ တိုင်းပြည်မှာ နေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ သက်သောင့်သက်သာ ရှိမှုတွေ ကွာသွားတယ်လို့ ဆိုရမယ်။
မကြာခင် ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်တော့မှာမို့ ဒီနေ့ ကျောင်းလခ သွင်းဖို့အတွက် ကျောင်းသားရေးရာ ဌာနကို သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ထုတ်စရာ စာရွက်စာတမ်းတွေကို ထုတ်ပြီး ကျောင်းလခ ငွေသွင်းဖို့ ဘဏ်ကို သွားခဲ့ရာကနေ စိတ်ကူးထဲမှာ ပေါ်လာတာလေးတွေကို ချရေးဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ltcho at 11:47 PM No comments:
ခရီးထွက်တဲ့အခါမှာ သင့်ကိုငွေကုန်ကြေးကျ ပိုများစေတဲ့ အမှား (၁၂) မျိုး
သင်ဟာ ခရီးထွက်ရတာကိုအရမ်းကြိုက်တဲသူဆိုရင် ခရီးထွက်တဲ့အခါမှာ သင့်ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းလေးတွေ ထားထားမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လေယာဉ်ကွင်းမှာ လေယာဉ်ဆိုက်တာနဲ့ ငွေလဲတဲ့နေရာ (သို့) တက္ကစီငှားရမယ့်နေရာကို ရှာနေရမယ်ဆိုရင်တော့ လူတော်တော်များများ လုပ်မိတဲ့အမှားတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီထားတဲ့ အမျိုးအစားတွေကနေတစ်ဆင့် ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒီဟာတွေကသင့်ရဲ့ ငွေကြေးတွေကိုပိုစုဆောင်းနိုင်ပြီးနောက်ထပ် အံ့သြဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ စွန့်စားခန်းတွေအတွက် ငွေတွေကျန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Ltcho at 11:45 PM No comments:
👉 အာလူးပုပ်ပုံပြင် 👈
[ ဘဝအတွက် သင်ခန်းစာယူကြစေဖို့ပါ ]
သူ့အတန်းသား တပည့်တွေနဲ့ ကစားနည်းတစ်ခု ကစားကြည့်ရန်
ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာမက ကျောင်းသားတစ်ဦးဆီကို အားလူးအနည်းငယ်စီ ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲထည့်ပြီး
အတန်းထဲ ယူလာခဲ့ဖို့ မှာကြားလိုက်ပါတယ် ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့အမည်ကို မှည့်ပေးရမယ်။ ပလပ်စတစ်အိပ်ထဲထည့်ပီး ယူဆောင်လာတဲ့ အာလူးအရေအတွက်ဟာ ကလေးတွေမုန်းတီးတဲ့ လူအရေအတွက်ပေါ် မူတည်နေပါတယ်။
Posted by Ltcho at 11:44 PM No comments:
တစ်ခါတုန်းက ရွာတစ်ရွာမှ သူဌေးကြီးတစ်ဦးဟာ သူ့ရွာက လူငယ်ရွာသားလေးတွေထဲမှာ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သူ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ စမ်းသပ်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်လိုက်တယ်..။
အစီအစဉ်အရ ရွာလယ် မြေကွက်လပ်ကြီိးမှာ ဝါးလုံးတိုင်တစ်တိုင်ထူပြီးဝါးလုံးဖျားမှာ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေချိတ်ဆွဲထားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ရွာထဲက လူငယ်တွေကို ခေါ်လိုက်ပြီး....
" ကိုင်း..ငါ့လူတို့..ဒီဝါးလုံးတိုင်ပေါ်ကို ဖက်လည်းမတက်ရဘူး..လှဲလည်းမလှဲရဘူး..မင်းတို့နည်း မင်းတို့ဟန်နဲ့ ဝါးလုံးဖျားမှာချိတ်ထားတဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကို ရအောင်ယူကြပေတော့.." လို့...သူဌေးကြီးက ပြောလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ltcho at 11:43 PM No comments:
ဆန္ဒ နဲ့ ဘဝ
🎈 ဆန္ဒ နဲ့ ဘဝ
❖ ဖြစ်ချင်တာက တခြား၊
❖ အဲဒါကိုက တရားပဲ။
❖ ဆန္ဒဆိုတာလည်း ခဏ
❖ ဘဝဆိုတာလည်း ခဏပဲ မဟုတ်လား။
▒▒ မရလို့လည်း မဆဲနဲ့။
▒▒ ရနေလို့လည်း မကဲနဲ့။
▒▒ မမြဲတဲ့ဘဝမှာ အလွဲမကျဖို့သာ ကြိုးစားပါ။
☀ (မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ) ☀
★ _/\_\__ သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ၊ _/\_\__ ★
Posted by Ltcho at 11:41 PM No comments:
သာလွန်သော ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်....
Posted by Ltcho at 11:40 PM No comments:
ဘဝမှာ ကြားသမျှ စကားလုံးတိုင်းကို တုံ့ပြန်ဖို့ မလိုသလို ငုံ့ခံနေဖို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ တစ်ချို့သူတွေရဲ့စကားလုံးတွေဟာ တုံ့ပြန်စရာမလိုဘဲ သူ့အလိုလိုပြီးသွားတာတွေရှိတယ်။
တုံ့ပြန်လိုက်မှပိုရှုတ်သွားတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ စကားလုံးတိုင်းကို ခံစားနေဖို့ မလိုဘူး။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်နေဖို့ပဲလိုတယ်။ အလုပ်မှန်ရင် တုံ့ပြန်စရာမလိုဘဲ အလုပ်က ဖြေရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ မတုံ့ပြန်တာဟာ ငုံ့ခံနေတာ
မဟုတ်ဘူး။ အပင်ပန်းခံပြီး မခံစားတဲ့သဘောပဲ။တစ်ချို့စကားတွေကျတော့
Posted by Ltcho at 11:38 PM No comments:
လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားစေသော အတွေးအမြင် စကားလုံးများ
၁။ သင်ဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့ မှာ၊ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ တန်ဖိုးမရှိတာ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ နောက်လူတစ်ဦးရဲ့ ရှေ့ မှာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာသဖွယ် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မိမိတန်ဖိုးရှိရာ ကို သိပါ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာမှာပဲ မွေ့လျော်ပါ။
Posted by Ltcho at 11:37 PM No comments:
မမြင်မတွေ့သလို နေလိုက်ရတာ ပိုကောင်းပါတယ်...
အဲဒါဆိုရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နေရတာ သဟာဇာတ ဖြစ်လိမ့်မယ်....
Posted by Ltcho at 11:36 PM No comments:
သင့်ကို နှိမ်ခဲ့တဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်ပါ..
သင့်အလှည့်ကျရင် နိမ့်ကျတဲ့သူတွေကို လက်တွဲခေါ်ပါ..
သင့်ကို ကဲ့ရဲ့ခဲ့တဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်ပါ..
သူ့ကြောင့် ကဲ့ရဲ့ခံရရင် ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာ သင်သိခဲ့တာပါ..
သင့်အလှည့်ကျရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြန်မကဲ့ရဲ့ပါနဲ့..
Posted by Ltcho at 8:35 AM No comments:
Labels: Keys To Success, ထင်ရှားသူတို့, မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားစုများ
ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးတွေရဲ့ ချွေတာရေးနည်းလမ်း (၉)ခု
ငွေကြေး အရမ်းချမ်းသာလာတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲမေးလိုက်ရင် အများစုက ကားအကောင်းစားဝယ်စီးမယ်၊ အိမ်ကောင်းကောင်းမှာ နေမယ်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ၊ နာမည်ကြီးတံဆိပ်တွေ ၀ယ်သုံးပစ်လိုက်မယ်လို့ ဖြေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးဆိုတဲ့ လူတွေကို လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့တွေက ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေအတွက် ငွေကို ပရမ်းပတာ သုံးစွဲလေ့မရှိတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က ငွေကို စီစစ်ချွေတာပြီး သုံးတတ်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးတွေရဲ့ ချွေတာရေးနည်းလမ်း (၉)ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ltcho at 8:33 AM No comments:
ဘယ်တော့မှ လက်မြောက် အရှုံးမပေးတတ်တဲ့ ဟွန်းဒါး
🔴ဂျပန်နိုင်ငံက .မော်တော်ကားနဲ့ မော်တော် ဆိုင်ကယ်တွေ. တကမ္ဘာလုံးကို တင်ပို့နေတဲ့. ဟွန်းဒါး(Honda) ဆိုတာ .ကြားဖူးကြမှာပါ။
☆☆☆. ဟွန်းဒါး ကုမ္ပဏီကို စတင် တည်ထောင်သူက. ဂျပန်လူမျိုး ဟွန်းဒါးပါ။. နာမည် အပြည့်အစုံက. Soichiro_Honda (ဆိုချီယို ဟွန်းဒါး )ဖြစ်ပါတယ်။. ဟွန်းဒါးကို. အနောက်နိုင်ငံက. သတင်းစာ .မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ .အခက်အခဲနဲ့ ဘယ်လောက်ကြုံကြုံ. ဘယ်တော့မှ အရှုံမပေးတဲ့ လူလို့ ချီးကျူးရေးသား ကြပါတယ်။
☆.ဘာဖြစ်လို့. ဂျပန်လူမျိုးတယောက်ကို. အနောက်နိုင်ငံတွေက .ချီးမွန်းနေရတာလဲ ဆိုတာ
Posted by Ltcho at 8:32 AM No comments:
Labels: Keys To Success, ထင်ရှားသူတို့, အတ္ထုပ္ပတ္တိ
ဆရာက ကျောင်းသား နှစ်ယောက်ကို မေးခွန်းမေးပါတယ်။ အင်မတန်အဆင့်မြင့်ပြီး အတော်စဉ်းစားယူရတဲ့ သင်္ချာ ဥာဏ်စမ်းတွေပါ။
ပထမ ကျောင်းသားက မေးခွန်းခက်တာကို မြင်ပြီး ဒီလိုစဉ်းစားပါတယ်၊
"ဆရာက ငါမဖြေနိူင်မယ့် မေးခွန်းတွေကို တမင်သက်သက် မေးတာပဲ၊ ဟိုတစ်ခါတုန်းက သူလာတာကို ထနှုတ်မဆက်ပဲ နေမိတာကို မကျေနပ်လို.ဖြစ်မယ်" .
... သူဒီလို စတွေးတာနဲ.တင် မေးခွန်းတွေကို ကောင်းကောင်း မဖြေနိူင်တော့ပါဘူး...
Posted by Ltcho at 8:30 AM No comments:
ကျွနုပ်တို့ တစ်ဦးက ရွေးချယ်ရမှာပါ။
Posted by Ltcho at 8:29 AM No comments:
" အမေ့ကို အာခံ၍ပြန်မပြောခင်..."
တစ်​နေ့သောနံနက်ခင်း​လေးမှာ အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်အား အိပ်ယာမသိမ်းမိလို့
မိဘဆီ ခွင့်မတိုင် ...ကြည့်စမ်း ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲ
တစ်နေကုန် ဂိမ်းဆော့နေ. . ." အစရှိသဖြင့်
Posted by Ltcho at 8:28 AM No comments:
မြေကြီးမှာ အလှည်းခံရတဲ့ တံမြက်စည်းက
Posted by Ltcho at 8:25 AM No comments:
Labels: ပုံပြင်, မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားစုများ
ခွဲခြားသုံးသပ်ရင်း တိတ်တဆိတ်ပဲ နေဖြစ်သွားတယ်....
Posted by Ltcho at 8:23 AM No comments:
ဘဝ မှာ နာကျင်​စရာ​တွေ ကြုံရတာများ​တော့
ကိုယ့်​က အဖြူစင်​ဆုံး ​ပေးဆပ်​တယ်​ဆို​ပေမယ့်​
ဆန္ဒ​တွေ များစွာ ရှိခဲ့​ပေမယ့်​ မ​သေချာ မ​ရေရာတဲ့ဘဝမှာ
Posted by Ltcho at 8:21 AM No comments:
" သမီးရယ် အမေရောဂါနဲ့ ဒီးဟင်းတွေနဲ့ စားလို့မှမရတာ
"ဒီမှာ တော်သားရတဲ့လစာနဲ့ ဒီဟင်းနဲ့ပဲစားရတာကံကောင်းတယ်မှတ်"
"မင်းကလဲကွာ အမေမှာဒီဟင်းတွေနဲ့မတည့်ပါဘူး မစားနဲ့လို့
Posted by Ltcho at 10:14 AM No comments:
Labels: သုတ၊ရသ, အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေး
ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါက ပိုက်ဆံနောက်လိုက်မလား၊
ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ။ ၂၀၁၃ခုနှစ်လောက်ကပေါ့။ ကျွန်တော်
ဝင်ငွေကောင်းတာကိုလည်း သိခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်
Posted by Ltcho at 10:12 AM No comments:
Labels: မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားစုများ, ငွေရေးကြေးရေး
ကြောက်စရာ ကောင်းတဲ့ ဟမ်းဖုန်း
လူသားများရဲ့ သမိုင်းမှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတီထွင်မူဟာ ဘာလဲ၊
မဟုတ်ဘူး၊ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးက ဟမ်းဖုန်းပါ။
ဟမ်းဖုန်းက တီဗွီကို နေရာယူသွားပြီ။
လက်နှိပ်ဓါတ်မီး ကို အစားထိုးသွားပြီ။
ကြည့်မှန်၊ သတင်းစာ၊ ဂိမ်းစက် အားလုံးကို အနိုင်ယူသွားပြီ။
ပြက္ခဒိန်နဲ့ လေယာဉ်လက်မှတ်လည်း သူနေရာယူသွားပြီ။
Posted by Ltcho at 10:10 AM No comments:
Posted by Ltcho at 9:46 AM No comments:
Labels: ပုံပြင်, ဟာသ
ရှုံးနိမ့်ဖူးသူမှသာ အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်ရဲ့ ချိုမြိန်မှုကို
ပိုပြီးတန်းဖိုးထား အရသာ ခံတတ်တယ်။
လျှောက်ရခြင်းရဲ့ တန်းဖိုးကို မြင်တတ် တန်ဖိုးထားတတ်မယ်။
နာနာကျင်ကျင် ငိုဖူးတဲ့ သူမှသာ
လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပျော်ရွှင်ရယ်မောခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို ပိုပြီး မြတ်နိုးနှစ်ခြိုက်ရကောင်းမှန်း သိတယ်။
Posted by Ltcho at 9:45 AM No comments:
လူတိုင်းမှာ ပန်းတိုင်တွေချမှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -
အလုပ်တွေ အကုန်လုပ်ပြီးသွားရင် အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတာဟာလဲ တစ်ယောက်သော
သူအတွက် တစ်နေ့စာပန်းတိုင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုပန်းတိုင်
မျိုးကြောင့် ဘ၀ကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ့် အကျိုးရလာဒ်တွေတော့မဟုတ်
ဖူးပေါ့။ အဲဒိတော့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ကြည့်ရအောင်။
Posted by Ltcho at 9:44 AM No comments:
ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့ မည်သည် ..
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင် ဖြစ်သည် ...။
စစ်မြေပြင်သို့ထွက်ခွာ ခါနီးတွင် စစ်တပ်အသီးသီး၏ အကြီးအကဲအရာရှိများနှင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်ကြီး တို့ ညစာစားပွဲ တွင်ဖြစ်သည် ...။
အားလုံး စုံစုံညီညီပင် ညစာ စားပွဲရှည်ကြီးတွင် နေရာ အသီးသီး ယူထားပြီးကြပြီဖြစ်သည် ..။
ညစာ မစားမီ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက တိုက်ပွဲအကြို မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်မို့ အရာရှိကြီးများသည် ငြိမ်သက်စွာ နားစွင့်နေကြသည် ..။
သို့ရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက မည်သို့မျှ စကားဆိုခြင်း မရှိသေးဘဲ မိမိရှေ့တွင် ချထားသော ပန်းကန်လေး တစ်ချပ်ဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေ၏ ..။
Posted by Ltcho at 9:42 AM No comments:
Facebook Logo ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်သွားပြီ
ကားပေါ်မှာ လူလေးယောက် ပါလာတယ်။
သုံးယောက်က ဖုန်းကိုယ်စီနဲ့ Facebook သုံးနေတယ်။
ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ မသုံးဘူး။
သို့သော် မီးပွိုင့်မိတော့ သူလည်း ဖုန်းထုတ်ပြီး
Facebook ကို ကျန်တဲ့ သုံးယောက်နဲ့ အပြိုင်သုံးတယ်
သတိမထားမိလို့ နောက်ကားတွေ ဟွန်းတီးပြီး ဆဲမှ
Posted by Ltcho at 9:41 AM No comments:
ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းကြံနေသူတွေကို လက်တုန့်ပြန်မယ့်အစား
အသိတရားဝင်အောင် မေတ္တာထားလို့မရရင် ဥပေက္ခာပြုနိူင်အောင်
Posted by Ltcho at 9:38 AM No comments:
ထိုင်ဝမ်မှာ သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ ရှင်းရင်ဘုန်းတော်ကြီး ဟောတဲ့တရားထဲကပါ။ နှစ်သက်လို့ ပြန်လည်ဖောက်သည်ချလိုက်ပါတယ်။
လူမှာ အမျိုးအစားလူတန်းစား ၃ မျိုး ၃လွှာ ခွဲခြားထားပါတယ်။ ။ အထက်တန်းလွှာ၊ အလယ်တန်းလွှာ နဲ့ အောက်တန်းလွှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုဒီလိုခွဲခြားထားပါတယ်။
Posted by Ltcho at 3:56 AM No comments:
Labels: ဗဟုသုတ, မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားစုများ, လူမှုဘဝ
ချပ်ဖီးနေ Chuck Feenay
9Plus Myanmar added2new photos.
သူပိုင်ဆိုင်သမျှ ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ရှစ်ထောင်ကျော် လှုဒါန်းနေသူ
သူ့ကို နယူးဂျာစီနေ အမေရိကန်အိုင်းရစ်လူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် သာမန်မိသားစုတစ်စုက မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ၂ဝ၁၁ခုနှစ်မှာ သူ့အသက်(၈ဝ)ပြည့်ခဲ့ပြီး အမေရိကန် ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာ အိမ်ခန်းနှစ်ခန်းပါတဲ့အိမ်လေးမှာ ဇနီးနဲ့အတူ ငှားရမ်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကြီးတံဆိပ် အဝတ်အစားတွေ သူ မဝတ်ဆင်ခဲ့ဖူးသလို သူ့မျက်မှန်ကတည်း ဟောင်းနွမ်းနေခဲ့ပါတယ်။ သူ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့ နာရီကလည်း မြေအောက်ဘူတာတစ်နေရာမှာ ဝယ်ခဲ့တဲ့နာရီဖြစ်တယ်။ အစားအသောက်ကောင်းတွေကို သူ မမက်မောခဲ့ပါဘူး။
Posted by Ltcho at 3:54 AM No comments:
Labels: Keys To Success, ထင်ရှားသူတို့, အတ္ထုပ္ပတ္တိ, နှလုံးသား အစာ အဟာရ
“ အောင်မြင်မှုအတွက် ဘယ်အရာက အရေးပါဆုံးလို့ ထင်ပါသလဲ ”
Posted by Ltcho at 3:52 AM No comments:
Labels: Keys To Success, ပုံပြင်, သုတ၊ရသ
Aung Ko Latt (ရာမညမြေ
Posted by Ltcho at 3:50 AM No comments:
စာဖတ်ခြင်းအနုပညာကို ကျင့်သုံးဖို့အတွက် မွတ်သိပ်တဲ့၊ စူးစမ်းချင်စိတ် ပြင်းပြတဲ့
စောဒကတက် မေးမြန်းတတ်တဲ့စိတ်ကို ဖွံ့ဖြိုး စေပြီး အဖြေတွေကို စာအုပ်တွေထဲမှာ ကြိုးစား ရှာဖွေပါ။
အဲဒီတံခါးတွေဟာ အဆွေ့ဘဝရဲ့ ရှုထောင့် တွေကို ကျယ်ပြန့်လာအောင် ချဲ့ပေးမယ့်
သုတ ပညာဉာဏ်နဲ့ ဈာန်ဝင်စားမှုဆိုတဲ့
အကန့်အသတ်မဲ့ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖွင့်ပေးထားတဲ့
Posted by Ltcho at 3:49 AM No comments:
Labels: စာဖတ်ခြင်း အနုပညာ
Posted by Ltcho at 3:48 AM No comments:
Labels: ဘဝနေနည်း, မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားစုများ
ကိုယ့်ကို ဆက်ဆံရေးကျဲသွားသူတွေကို အရင်လို
အောက်ကျို့ခံပြန် မပေါင်းဖြစ်တော့ဘူး။ ။
မာနအပြိုင်ကြီးတာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကြောင့်သူ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့
Posted by Ltcho at 3:46 AM No comments:
(၁)တခါက လူတုံးလူအ တယောက်သည် ဈေးထဲတွင် လှည့်လည် ကျက်စားနေသည်။ လူများက သူ့အား နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စနောက်ကြသည်။ လူတွေ အမြဲစနောက်သော နည်းတခုမှာ လက်ဖ၀ါးပေါ်တွင် ၅ကျပ်တန်နှင့် ၁၀ကျပ်တန်ကိုတင်ပြီး သူ့အား ရွေးယူစေသောနည်းဖြစ်သည်။
Posted by Ltcho at 3:45 AM No comments:
မင်းလည်း မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြောဖူးပါလိမ့်မယ်။ ငါအရမ်းချမ်းသာချင်တယ် ဒါမှ ငါ့မိသားစု အတွက် ငါကျေးဇူးပြုနိုင်မယ်။ ငါ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ငါလုပ်ပေးနိုင်တာလုပ်ပေးလို့ ရမယ်။ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
ပထမ အဆင့်အနေနဲ့ ဘ၀ အောင်မြင်ဖို့ အတွက်အရေးအကြီးဆုံးကတော့နောက်ကလိုက်ဆိုကြည့်...
Posted by Ltcho at 3:44 AM No comments:
Learning Disability (သို့ မဟုတ်) သင်ယူနိုင်မှုခက်ခဲခြင်း
မိဘတိုင်းဟာ ကိုယ့်သားသမီးကို တော်စေချင်၊ ထူးချွန်စေချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာ မိဘက စေတနာအပြည့်အ၀နဲ့ငွေကုန်ကြေးကျခံ ပြီး ကိုယ့်ကလေးကို သင်ကြားပေးပေမယ့် ကလေးက သင်ယူနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ အခါမှာ ဂရုဏာဒေါသတွေဖြစ်ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ကလေးရဲ့ အားနည်းချက်ကို မသိဘဲ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ အတိုင်း အတင်း ပုံသွင်းယူနေမယ်ဆိုရင် ကလေးအတွက် လည်း ဒုက္ခတွေဖြစ်နိုင်သလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒေါသဖြစ်ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဒီလို ဂရုဏာဒေါသတွေကြောင့် လက်လွန်တဲ့ အထိဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကလေးမှာ သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိမရှိ သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် Learning Disability လို့ ခေါ်တဲ့ သင်ယူနိုင်စွမ်းမရှိခြင်း ဆိုတဲ့ ရောဂါအကြောင်းကို ဗဟုသုတရအောင်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Ltcho at 3:43 AM No comments:
Labels: ပညာရေး, အချစ်နှင့်အိမ်ထောင်ရေး
English စာ & စကား အပိုင်း အစများ
Facebook မှာ English သီးသန့်
Blogger Tips&Tricks (22)
Keys To Success (886)
ခရစ်တော်၏ ဒိုင်ယာရီ (5)
စာဖတ်ခြင်း အနုပညာ (103)
မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားစုများ (1215)
ဖေမြင့် -နှလုံးသားအာဟာရ (13)
နှလုံးသား အစာ အဟာရ (355)
မြွေဖြူ မလေးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း
天下第一 added4new photos . မြွေဖြူ မလေးရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း မြွေဖြူ မလေးရဲ့ ပုံပြင်လေးကိုတော့ မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ တော်တော်လေးကို ရင်း...
Fashion Week 2012 မှာ ရှိုးလျှောက် ခဲ့တဲ့ မိုးယံဇွန်က အခုသူ့ရဲ့ ဒုတိယတစ် ကိုယ်တော်စီးရီးလည်း ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ် ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒုတိယတစ...
ZERO NEO ရဲရဲသာဖတ်ပါ… အပြာကား… အပြာကားကို အပြာကားလို့ပဲ သိစိတ်ထားပြီးမှ ကြည့်ပါ … ----- ခုခေတ်တော့ 18+လို့ ခေါ်ကြတာ...
ပျောက်ဆုံးနေသောနေ့ ရက်တစ်ရက်ကို အဖြေရှာ မရသောNASA အဖွဲ့ ကျမ်းစာအားဖြင့်အဖြေမှန်တွေ့
Christain Bible Wisdom added4new photos . ပျောက်ဆုံးနေသောနေ့ ရက်တစ်ရက်ကို အဖြေရှာ မရသောNASA အဖွဲ့ ကျမ်းစာအားဖြင့်အဖြေမှန်တွေ...
Thura Zinsoe အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတိုးတက်စေဖို့ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ကျွန်တေ်ာ မြန်မာပြည်ပညာရေးစနစ်အောက်မှာပဲ...
မြန်မာဆေးနည်းထဲမှာ ရေချိုးနည်းဆိုပြီး ရှိတယ်။
Myanmar News Update မြန်မာဆေးနည်းထဲမှာ ရေချိုးနည်းဆိုပြီး ရှိတယ်။ “ရေချိုးတဲ့အခါ ခြေထောက်ကို အရင်ရေလောင်းပါ။ တဖြေးဖြေး ဒူး၊...
ဂျေလှသင် ***ကျွန်မကိုမွေးတဲ့မြို့** * (Written by - ဂျေလှသင်) မြို့နာမည်ကတော့မမေးနဲ့နော် ။ ဒီအတိုင်းပြောပြ...
#‎Leonardo‬ ( တသက်တာအကောင်းဆုံးသ ရုပ်ဆောင်၁၀၀ထဲကအသက်အငယ်ဆုံးမင်းသား (သို့) လမ်းမပေါ်ကအလေအလွင့်ဆေးသမားတ ယောက်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ)
Htet Wa Na added 15 new photos — with Poe Poe Phyu and 49 others . ‪#‎ Leonardo‬ ( တသက်တာအကောင်းဆုံးသ ရုပ်ဆောင်၁၀၀ထဲကအသက်အငယ်ဆ...
တောင်အာရှမှာ စားကျက်ရှာလာတဲ့ အယ်လ်ခိုင်ဒါနှင့် မြန်မာ၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အန္တရာယ်
Yangon Media Group တောင်အာရှမှာ စားကျက်ရှာလာတဲ့ အယ်လ်ခိုင်ဒါနှင့် ========================== ====================...
လေ့လာ စရာ English စာ & စကား
Dr.Soe Than (6)
Hmine Wai Yds (68)
Maung Maung One (50)
Richard Michael William (217)
Sayar Antony (102)
Wh - Questions (8)
Win Naing Oo (395)
စုစည်းမိသမျှ လောက သီချင်း
IC 15 နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်
Nang Khin Zay Yar-Nonstop
တစ်နယ်စီခွဲနိုင်မလား-R.ဇာနည် & ဆုန်သင်းပါရ်
ဘန်နီဖြိုး - လူပျိုလှည့်တေး
မလေးရှားပြဇာတ်‬-Val Modern Chilll
မြစ်နှစ်စင်းရဲ့ပင်လယ်-R.ဇာနည် N ဆုန်သင်းပါရ်
ဝိုင်ဝိုင်း...လမင်း နှင့် ပင်လယ်
အချစ်ရေပြန်ခဲ့တော့-ခင်ဘုန်း & ရှင်ဖုန်း
အပိုဆု - ဆောင်းဦးလှိုင်
ဝေးဝေးကလွမ်း-မာရဇ္ဇ & လုလု
ယောက်ဖရေ - ဒွန်း
ရှေ့ဆက်ရန်စဉ်းစားပါ-R.ဇာနည် & ဆုန်သင်းပါရ်
ကျွန်ုပ်၏ အလိုအပ်ဆုံးဟာ ကိုယ်တော်သာ
ဆာလံ ၂၃-A Kuk
သခင် အလိုရှိသည့် မေတ္တာ
အချိန် နှင့် ဒီရေ
အစ နှင့် အဆုံး
ကျေးဇူးတော်နေမဝင်သေးခင်-Sangpi & Kying Lian Moong
ဆောင်းည ခရစ္စမတ် သီချင်းများ
" တို့ရွာသမိုင်း "
တော်လှန်ရေး၏ ကျေးဇူးတည်း။ ။
သမိုင်းက စိတ်မပျက်စေနဲ့ ။
ကျွန်တော်တို့ပဲ နစ်နာကြမှာ ။
ပြောရဲတာ တစ်ကောင်မှမရှိဘူး ။
ဒါကြီးခြုံပြီး နွေးနေရတာ ။
" ကျုပ်မှာ ကာမပိုင်နဲ့ဗျ " တဲ့
ဆွဲလုလိုက်တာ မအံ့သြပါနဲ့ ။
၃၂ နှစ်နဲ့ သေခဲ့တာတောင်
သူအခုထိ ဆွဲလုနေနိုင်တုန်း ။
ဦးဌေးမြိုင် (သို့) ဒဂုန်တာရာ
မျက်ရည်ဝဲရင်း အလေးပြုမိလို့ ။
တိုက်တွေ ကားတွေ လက်မဖွဲ့လို့
" ငွေသော်တာရောင်ခြည်" ဆိုတာ
အပိုဆာဒါးတွေ မပါဘူး ။
နိုင်ငံရေးလောက က ထွက်ရင်
ခြံစိုက်မယ် စာရေးမယ် ဆိုတဲ့ သူ
အော်…… ဒုက္ခ ဒုက္ခ...
တနှစ်တခါ ၀တ်ကျေတန်းကျေ အလေးပြုခံရ
ဥက္ကဌ ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့်လို့
လက်ညှိုးထိုး တရားခံ လုပ်ခံရ၏
လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပန်းခွေချခွင့် မရ။
လူတိုင်းပါးစပ်ဖျားက “ တော်တော် ” လို့
“ ရေဂင် ” အလုံးက
ကိုယ်မပြောချင်ဘူး ဆိုတာပဲ ” တဲ့
“ ကိုယ်တို့အစိုးရဟာ တရားဝင်အစိုးရ
တိတိကျကျ မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန်ဆန်ဆန်
“ ဘီလူးသွားကို လဖြဲ ” တည်းတဲ့
နယ်ချဲ့ တွေက ကျွန်ပြုဖို့ ကျွန်တော်တို့ ဆီကိုလာတယ်။
လူဖြစ်ပေမယ့် ရွေးချယ်ခွင့်က မရှိခဲ့ဘူး အမေရယ်။
ကျွန်ရွာ....မှာမှ သွားရှာမိတဲ့ အဖြစ်။
ရှင်ရင်တော့ မစို့ မပို့ ငွေလေးက ကျွန်တော်တို့ အတွက်ရွှေထီးပေါ့။
တရွာပြောင်းပေမယ့် သူကောင်းတော့ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော ကတော့ ကျွန် ...ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်… အမေနဲ့ ညီမလေးတွေအတွက် ရဲ...ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ရဲရင့်မှုတွေကပဲ နေရာလွဲခဲ့လို့ လား။
ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို သိဖို့ နေနေသာသာ
တစ်ချို့ သူငယ်ချင်းတွေဆို ကိုယ့် အသက်ဘယ်လောက်ရှိမှန်းတောင် မသိရှာဘူး။
သူတို့ မှာ မရှိဘူး အမေ။
ပြန်မစုပ်ချင်တဲ့ သရက်စေ့ တစ်စေ့ပေါ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျွန်လို့ သုံးလို့ 
ဒါကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သခင်လို့ 
အနာရှိတာကို လက်ခံမှ ဆေးထည့်လို့ ရမှာပေါ့ အမေ။
မြန်မာ အချင်းချင်း ရိုင်းပင်းတယ်ဆို။
တချို့ ကတော့ တော်တော့်ကိုဆိုးတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ လူစိတ်မရှိတာ ကတော့
အကုန်လုံးနဲ့ တော့မတန်ဘူး အမေ။
ကျွန်တော်တို့ အတွက်တော့ သူက
ကျွန်တော် ငှက်တွေကို ငေးကြည့်မိတယ် အမေ။
ငှက်တွေမှာ ကိုယ့်အသိုက်အမြုံကို ဗိုလ်ကျပြီး အတင်းရွှေ့ ခိုင်းတာမျိုး မရှိဘူး။
လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ ပန်းဟာ
ဖိနှိပ်သူတွေရဲ့ နှုတ်ခမ်းမှာ မပွင့်ဘူး အမေ။
မူရင်း W.E.Henley ၏ Invictus
ငါ့အား ဖုံးလွှမ်းထားသော လကွယ်သန်းခေါင်၊ ဤမှောင်မိုက်တွင်းမှနေ၍ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေးတတ် သော ငါ၏ စိတ်ဓာတ်ကို ဖန်ဆင်းပေးသည့် နတ်သိကြားတို့အား ငါကျေးဇူးတင်၏။
လောကဓံ တရားတို့၏ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လက်ဆုပ်တွင်းသို့ ကျရောက်နေရငြားသော်လည်း ငါ ကား မတုန်လှုပ်၊ မငိုကြွေး၊ ကံတရား၏ရိုက်ပုတ်ခြင်းဒဏ်ချက်တို့ကြောင့် ငါ၏ဦးခေါင်းသည် သွေးသံတို့ ဖြင့် ရဲရဲနီ၏။ ညွှတ်ကား မညွှတ်။
ဤလောဘဒေါသတို့ ကြီးစိုးရာဌာန၏ အခြားမဲ့၌ကား သေခြင်းတရားသည် ကြောက်မယ်ဖွယ်ရာ ငံ့လင့် လျက် ရှိ၏။ သို့သော် ငါ့အားမတုန်လှုပ်သည်ကိုသာ တွေ့ရအံ့။ နောင်ကိုလည်း ဘယ်တော့မှ မကြောက် သည် ကိုသာ တွေ့ရအံ့။
သုဂတိသို့ သွားရာတံခါးဝသည် မည်မျှကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ယမမင်း၏ခွေးရေပရပိုက်၌ ငါ့အပြစ် တို့ကို မည်မျှပင်များစွာ မှတ်သားထားသည်ဖြစ်စေ၊ ငါကား ဂရုမပြု။
ငါသာလျှင် ငါ့ကံ၏အရှင်သခင်ဖြစ်၍ ငါသာလျှင် ငါ့စိတ်၏အကြီးအကဲဖြစ်သတည်း။
ကမ္ဘာတလွှားက မြန်မာ့ ငွေဈေး
တိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ မတိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည် ကြ...
ခရီးထွက်တဲ့အခါမှာ သင့်ကိုငွေကုန်ကြေးကျ ပိုများစေတဲ...
လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားစေသော အတွေးအမြင် စကားလုံးများ...
► 2017 (3531)
► 2016 (5182)
► January (876)
► 2013 (6443)